Fanamafisana hery fiarovana :: Nilaharana ilay fanafody vokarin’ny IMRA • AoRaha
Filaharambe no tazana teny amin’ny “Institut d’Hygiène de Recherches Appliquées” na IMRA Avarabohitra Itaosy, omaly. Ifanotofana ilay fanafody antsoina hoe « Aro Tsimoka Aretina » na ATA izay vita tamin’ny zava-maniry voavoatra amin’ny fanampiana ny hery fiarovana ho fisorohana amin’ny aretina « Coronavirus ». Tsy naharaka ny teny an-toerana satria mbola tsy nahitana an’io vokatra io ny teny amin’ny farmasia sy ireo mpivarotra.
«Avy any Ambohitrimanjaka aho izao no tonga ety mitady an’io fanafody io. Niala tamin’ny 8 ora sasany maraina ka izao amin’ny 11 ora sasany izao (Ndrl: omaly) vao migadona ety. Aleo misoroka raha mbola azo atao satria tsy misangy ity aretina ity raha voany”, hoy Rakotomanana David, isan’ireo nihazakazaka nividy an’ilay fanafody ATA.
Nanazava ny avy ao amin’ ny Imra fa efa nanao famandrihana ireo farmasia. Roa andro taorian’ny fampahafantarana an’io fanafody io vao nanafatra ry zareo, ka izay no mbola tsy ahitana azy eny amin’ireny toeram-pivarotana fanafody ireny.
“Ireo mpamongadin’ny faramasia no tena mamandrika fanafody ato aminay, amin’izao fotoana izao. Ry zareo indray no mitsinjara azy, avy eo. Vao maraina dia efa betsaka ny olona tonga nilahatra teto. Fanafody efa nisy io ATA io fa natambatra fotsiny ny singa rehetra amin’ ireo fanafody hiadiana amin’ ny gripa mba tena ahitana hery fiarovana”, hoy ny fanazavan-dRakotoson Haingo, tale ara-barotra ao amin’ny IMRA.
Efa misy eny amin’ireo toeram-pivarotana ny vokatra IMRA, toy ny etsy Mahamasina, Ambondrona, Pavillon 700 ary ao amin’ny tsena Soamanatombo.
Fiainana klioba :: Misedra olana ry Thomas Fontaine